Nadiifiyaha Gacanta, Maskaxda jeermiska jeermiska - Zhongrong
Waxaan ku Bixin karnaa Shayga sida ：
Gamco nadiifiye; 75% Jeermiska Aalkolada; Masaxa Aalkolada; Waxyaabaha Kiimikada ah (Ethanol Iyo Ethyl Acetate)
Iyadoo in ka badan 20 sano 'waayo-aragnimo diiradda on warshadaha jeermiska ku saleysan R & D, soo saaridda iyo suuq-geynta, waxaan bilaabaynaa brand TECH-BIO, oo waxaan leenahay go'aan si ay u sameeyaan sida brand ugu horeysay ee warshadaha jeermiska ee Shiinaha sababtoo ah waxaan leenahay tayada ugu sareysa ee khamriga kaas oo ay soo saartay warshaddeena.
Nadiifiye gacmeedka TECH-BIO iyo jeermis dilaha ayaa si ballaaran loogu isticmaali karaa dhammaan meelaha dadweynaha sida farmashiyaha, dukaamada waaweyn, isbitaalka, hoteelada, iskuulka, iwm iyo qoyska sidoo kale. Alaabtayada ceyriin ee kiimikada ah: ethanol etyl iyo ethyl acetate ayaa loo isticmaali karaa warshadda dawooyinka, warshadaha kiimikada wanaagsan, iwm.
Nadiifiye gacmeedka TECH-BIO iyo jeermis dilaha labaduba waxay ka kooban yihiin maaddooyin firfircoon 75% aalkolo oo dili kara 99.99% jeermiska ugu badan iyo sidoo kale covid-19 si loo ilaaliyo caafimaadkeena shaqsiyeed. Alaabtayada waxaa lagu daray maaddooyin qoyan oo gaar ah si aysan gacmaheenna waxyeello ugu soo gaarin. Waxaan si joogto ah u siin doonnaa alaab ilaalin shakhsiyadeed oo wanaagsan oo ka wanaagsan macaamiisha adduunka.
Zhongrong Technology Corporation Ltd (lambarka kaydka: 836455), waxaa la aasaasay 1999 kaas oo ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee Shiinaha ee ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuq geynta ethanol aan hadhuudh lahayn oo leh alaabteeda hoose. Waa soo saaraha ugu weyn ee aan soo saareyn ethanol ee Shiinaha, iyo soo saaraha ugu weyn ee acetate ee Waqooyiga Shiinaha iyo Waqooyiga-Bari Shiinaha.